NATO oo ciidamo Gurmad Degdega ah Abaabuleysa - Wargane News
Home Somali News NATO oo ciidamo Gurmad Degdega ah Abaabuleysa
NATO oo ciidamo Gurmad Degdega ah Abaabuleysa
Cutubyadii ugu horeeyey oo Ciidamada Gurmadka Degdega ah ee Isbaheysiga NATO ayaa lagu wadaa inay tagaan dalka Poland si halkaasi ay ugu sameeyaan dhoolatuskoodii ugu horeeyey.
Isbaheysiga NATO oo ka kooban 28 wadan ayaa sanadkii lasoo dhaafay go’aan ku gaaray inay dhisaan ciidamo Gurmad Deg Deg ah kuwaasi oo muddo kooban gudahood u gurman kara xulafada NATO hadii duulaan lagu soo qaado.
Dhismaha ciidamadan ayaa jawaab u ah dhaq dhaqaaqa Ciidamada Ruushka ka wadaan dalka Ukraine, xiisadaasi oo hada cirka isku sii shareertay.
Bisha May ee soo socta illaa June ayaa lagu wadaa in ciidamada ugu horeeyey ee kamid noqon doona guutooyina gurmadka deg degta inay dhoolatus ku sameeyaan dalka Poland.
Illaa iyo hada sadex wadan oo kamid ah NATO ayaa diyaariyey ciidamada ka qeyb qaadanaya dhoolatuskaasi kuwaasi oo kala ah Holland, Germany iyo Norway.
Maalinta khamiista ah ee soo socota ayey Wasiirada Gaashaandhiga ee dalalka NATO ku shirayaan magaalada Brussels iyadoo lagu wado in shirkaasi laga soo saaro go’aamo ku aadan dar dar gelinta dhismaha ciidamadan Cusub ee NATO abaabuleyso.
Somaliland: Faysal Oo Calanka Kulmiye Lagu Soo Dhaweeyay Iyo Tageero La,anta Faysal